Ogaden News Agency (ONA) – Qowmiyada Sidaama ee Koonfurta Itoobiya oo Afti Dalbanaysa.
Qowmiyada Sidaama ee Koonfurta Itoobiya oo Afti Dalbanaysa.
Posted by Wadi	/ February 21, 2019
Sida ay kusoo warayamaan ilo-wareedyo ku sugan Itoobiya waxaa saaka mudaaharaadyo waawayn kabilowdeen caasimada Gobolka Shucuubta Koonfureed ee Hawaasa.
Kumanaan shacab ah oo kasoo jeeda Qowmiyada sidaamaha oo ah qowmiyada ugu badan kilalka Shucuubta Konfureed ayaa saaka isugu soo baxday Badhtamaha magalada Hawaasa waxayna dalbanayaan in afti laga qaado Is-maamul ugaar ahna loo ogolaado.
Maamulka, Aqoonyahanka iyo waxgaradka Qowmiyada Sidaamaha oo banaanbaxan soo agaasimay ayaa sheegay inayna wax kilal gooni ah kayar ku qancaynin siina wadayaan mudaharaadada nabada ah ee xaqooda laduudsiyay kuraadsanayaan.
Banaan baxayaasha ayaa kuqaylinaya waxaan rabnaa Afti iyo maamul noo gaar ah xaqna waxaan uleenahay inaan anagu ismaamulo. Maamulka Shucuubta Koonfureed ayaad moodaa inuu gabi ahaanba burburayo kadib Markay Shucuubtii kumidowday midwalba maamul Ugaar ah dalbaday.
Tan iyo intii uu Xilka Lawareegay Raysal-wasaaraha Itoobiya Abiye Ahmed waxaa soo badanaya dadka aragtidooda sida xorta ah u cabiraya ee dalbanaya ayaa katashiga iyo in xuquuqaha kamaqan ay helaan, Balse Qowmiyada Somalida ayaa taas badalkeed kumashquulsan waxyaale hoose oo dhexdooda ah.